ဘာရ်ဘာရ်ဘာသာစကား - ဝီကီပီးဒီးယား
ဘာရ်ဘာရ်ဘာသာစကားများကို ဘာရ်ဘာရ်စကား သို့ အမာဇစ်ဘာသာဟူ၍လည်း သိပါသေးသည်။ (ဘာဘာအမည်: Tamaziɣt ၊ တာမာဇစ်ဟုဖတ်ပါ) Tamazightနီယို တီဖီနာဂ် : ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, Tuareg Tifinagh : ⵜⵎⵣⵗⵜ, (အသံထွက်, ထွါးရေဂ် တီဖီနာဂ် ), သည် အာရှအာဖရိသွေးနှောဘာသာစကားမိသားစုမှ ခွဲထွက်သော ဘာသာစကားဖြစ်သည်။ ဤစကားတို့တွင် မြောက်အမေရိကမှ တိုင်းရင်းသားများဖြစ်သည့် ဘာရ်ဘာရ် များပြောဆိုသောနီးစပ်ဆက်နွယ်သည့် ဘာသာစကားအုပ်စုတစ်စုပါဝင်သည်။  ဘာသာစကားများကိုရှေးဟောင်း Libyco-Berber စာဖြင့်ရေးသားခဲ့ပြီးယခု တီဖီနာဂ်ပုံစံဖြင့်ရေးသားခဲ့သည်။
မော်ရိုကို၊ ဇာဂိုရာ ရှိရှေး လီဘယ်ကို-ဘာရ်ဘာရ် ကျောက်စာများ
t tˤ t͡ʃ k q qʷ
b bʷdd͡ʒ ɡ
β ð ðˤ z zˤ ʒ ɣ ʕ
l ɫ j w
မော်ရိုကို - ၁၉၅၂ ခုနှစ်တွင်အန်ဒရေဘာစက်သည် (La langue berbère; ဘာရ်ဘာရ်ဘာသာစကား ၊ အာဖရိကဘာသာစကားများ၏လက်စွဲစာအုပ် ၊ အပိုင်း ၁၊ အောက်စ်ဖို့ဒ်) စာအုပ်တွင် ပမော်ရိုကိုရှိ မျိုးနွယ်စုငယ်များအနေဖြင့် ဘာရ်ဘာရ်စကားအား ပြောဆိုကြသည်ဟု ခန့်မှန်း၍ ရေးသားခဲ့သည်။ ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူမှုအရ မော်ရိုကိုလူမျိုး ၃၄ ရာခိုင်နှုန်းသည် ဘာဘာစကားပြောကြသည်၊ သုံးဘာသာနှင့်ဘာသာသုံးဘာသာစကားရှိသူများအပါအဝင်ဖြစ်သည်။[ကိုးကားချက်လိုသည်] 2000 ကားလ် Prasse Tawalt.com မှာ Brahim Karada အားဖြင့် ကောက်ယူအင်တာဗျူးတွင် "ထက်ပိုမိုတဲ့တတိယ" ထောက်ပြသည်။[ကိုးကားချက်လိုသည်] တစ်ဦးက 2007 ခုနှစ်ခန့်မှန်းချက် 7.5 သန်းမှာမော်ရိုကိုအတွက် Amazigh စပီကာများ၏အရေအတွက်ထားတော်မူ၏။ Ethnologue ၏အဆိုအရ (၎င်း၏ Moroccan Arabic ၏ကိန်းဂဏန်းများမှကောက်နုတ်ချက်အားဖြင့်), ဘာဘာစကားပြောလူ ဦး ရေခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၃၅.၅. သို့မဟုတ်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၁၀.၅. သန်းရှိသည်။ သို့သော်တစ်ဦးချင်းဘာသာစကားအတွက် ပေးသောကိန်းဂဏန်းများသည် ၇.၅ သန်းအထိသာသုံးမျိုးခွဲခြားထားသည်။
ရိုင်ဖယ် - ၃ သန်း
ရှိတ် - ၈ သန်း
ဗဟို Atlas Tamazight : 4-5 သန်း
အယ်လ်ဂျီးရီးယား - ၁၉၀၆ တွင် (လူ ဦး ရေနည်းပါးသောဆာဟာရဒေသမှဖယ်ထုတ်ပြီး) အယ်လ်ဂျီးရီးယားရှိဘာဘာဘာသာစကားများကိုပြောဆိုသောလူဦးရေသည် ၄,၄၄၇,၁၄၉ အနက် ၁,၃၀၅,၇၃၀ အနက် ၂၉ ရာခိုင်နှုန်းရှိသည်ဟုခန့်မှန်းရသည်။
Kabyle အဘိဓာန် များနှင့် Shawiya အယ်လ်ဂျီးရီးယား၏ဗဟို-အရှေ့ပိုင်းအစိတ်အပိုင်းအတွက်ဘာသာစကားများ
(Doutté & Gautier, Enquête sur la dispersion de la langue berbère en algérie, faite par l'ordre de M. le Gouverneur Général, Alger 1913) ။ ) ၁၉၁၁ ခုနှစ်သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူမှုမှာ ၄၇၇၀၅၂၆ အနက် ၁.၀၈၄,၇၀၂ စသည်တို့ကို ဆိုလိုသည်။ Doutté & Gautier ကဤသည်ကျယ်ပြန့်သော ဘာသာစကားနှစ်မျိုး ကွဲပြား သောဒေသများတွင် Shawiya ကိုအလေးအနက်ရေတွက်ခြင်း၏ရလဒ်ဖြစ်သည်ဟုအကြံပြုသည်။ အာရဗီ ( Blida မြို့ကဲ့သို့) ဝန်းရံထားသောဘာဘာအုပ်စုများသည်ဘာဘီကိုဝိုင်းရံထားကြပြီး Berber ဝန်းကျင်တွင်အာရဗစ်စကားပြောသူများက Tizi Ouzou မြို့အနီးရှိ Sikh ou Meddour ကဲ့သို့ဘာဘာကိုလက်ခံသည်။ ၁၉၅၂ ခုနှစ်တွင်အန်ဒရေဘာစေးကအယ်လ်ဂျီးရီးယားလူ ဦး ရေ၏သုံးပုံတစ်ပုံသည်ဘာဘာအားပြောဆိုကြသည်ဟုခန့်မှန်းခဲ့သည်။ ၁၈၈၆ တွင်သမိုင်းပညာရှင်ချားလ်စ် - ရောဘတ်အေဂျွန်၏အဆိုအရအယ်လ်ဂျီးရီးယားတွင်ဘာဘာစကားပြောသူ ၁.၂ သန်းနှင့်အာရပ်စကားပြောသူ ၁.၁ သန်းရှိသည်။ ၁၉၆၆ ခုနှစ်အယ်လ်ဂျီးရီးယားသန်းခေါင်စာရင်းအရဘာဘာစကားပြောဆိုရန်အယ်လ်ဂျီးရီးယား ၁၂,၀၉၆,၃၄၇ အနက် ၂,၂၉၇,၉၉၇ သို့မဟုတ် ၁၉ ရာခိုင်နှုန်းကတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ်တွင် Salem Chaker သည်အယ်လ်ဂျီးရီးယားတွင် ၃,၆၅၀,၀၀၀ (သို့) အယ်လ်ဂျီးရီးယားငါး ဦး တွင်တစ် ဦး သည်ဘာဘာဘာသာစကားကိုပြောဆိုသည်ဟုခန့်မှန်းခဲ့သည် (Chaker 1984, pp ။ 8-9) ။ Ethnologue ၏အဆိုအရ၊  လတ်တလောခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုတွင် ၁၄ ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်ပြီး (ဘာဘာဘာသာစကားတစ်ခုစီအတွက်ပေါင်းစပ်ထားသည့်စုစုပေါင်းကိန်းဂဏန်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၄ သန်း) နှင့် (၄ င်း၏အယ်လ်ဂျီးရီးယားအာရ်ကိန်းဂဏန်းများမှနှုတ်ယူပြီး) ၂၉ ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်သည် (Hunter 1996) ။ ယင်းတို့အနက်အများစုကိုဘာသာစကားသုံးမျိုးဖြင့်တွက်ချက်သည် (သင့်လျော်သောရက်စွဲမှသမိုင်းဝင်လူ ဦး ရေအချက်အလက်များအပေါ် အခြေခံ၍ ရာခိုင်နှုန်းများ) - 
ဘာရ်ဘာရ်ဘာသာစကားများရှိ နာမ်များသည် ကျား၊ မ (ပုဆိန်နှင့်ဣတ္ထိ)၊ နံပါတ် (အများကိန်းနှင့်အများကိန်း) နှင့် ပြည်နယ် (လွတ်လပ်သောပြည်နယ်နှင့် တည်ဆောက်မှုပြည်နယ် ) တွင်ကွဲပြားသည်။ အဆိုပါပုလ်၏ဖြစ်ရပ်မှာတော့နာမ်ယေဘုယျအားဖြင့်ဘာဘာ၏သုံးအက္ခရာများ၏တဦးတည်း, တစ်ဦးနဲ့စတင်, u သို့မဟုတ်ဈ (စံ orthography အတွက်အီးတစ်ဦးကိုကိုယ်စားပြုတယ် schwa အသံထွက်၏အကြောင်းပြချက်များအတွက်ဖြည့်စွက် [ə]
ixef → tixeft
ifassen → tifassin
afus →ifassen "လက်တွေ"
argaz → irgazen "ယောက်ျား"
ixef → ixfawen "အကြီးအကဲများ"
ul → ulawen "နှလုံးသား"
adrar → idurar "တောင်"
agadir → igudar "နံရံ / ရဲတိုက်"
abaghus → ibughas "မျောက်"
izi → izan "(အဆိုပါ) ပျံသည်"
azur → izuran "ခေါင်မိုး"
iziker → izakaren "ကြိုး"
tamghart → temghart "မိန်းမ / ရင့်ကျက်သောမိန်းမ"
tamdint → temdint "မြို့"
tarbat → terbat "မိန်းကလေး"
တတိယအချက်မှာ က ဦး တွင် သရဝက်အက္ခရာ ( w သို့မဟုတ် y ) ထည့်သွင်းခြင်းဖြစ်သည်။
asif → wasif "မြစ်"
auu → waḍu "လေ"
iles → yiles "လျှာ"
uccen → wuccen "ဝံပုလွေ"
taddart → taddart "အိမ် / ရွာ"
tuccent → tuccent "အမျိုးသမီး ၀ ံပုလွေ"
အောက်ပါဇယားသည်နာမ် amghar ၏ "လူဟောင်း / ခေါင်းဆောင်" အတွက်ပုံစံများကိုဖော်ပြသည်။
ပုံမှန် အေးဂျင့် ပုံမှန် အေးဂျင့်
နာမ် amghar အွမ် တကယ မိုးမခ
အများကိန်း imgharen yimgharen သီရိ temgharin
အလယ်ခေတ်ဘာဘာအရိုးစု, Boogert, Leiden တက္ကသိုလ် PDF
Brett မိုက်ကယ်; & Fentress, အဲလစ်ဇဘက် (1997) ။ ဘာရ်ဘာရ်များ (အာဖရိကပြည်သူ့) ။ ISBN 0-631-16852-4 ISBN 0-631-16852-4 ။ ISBN 0-631-20767-8 ISBN 0-631-20767-8 (Pbk) ။
Abdel-Masish, Ernest တီ 1971 ။ Tamazight ၏အကိုးအကား Grammar (Middle Atlas Berber) ။ အရှေ့တောင်နှင့်မြောက်အာဖရိကလေ့လာရေးစင်တာ၊ မီချီဂန်တက္ကသိုလ်
Basset, André။ ၁၉၅၂ ။ La langue berbère အာဖရိကဘာသာစကားများလက်စွဲစာအုပ် ၁၊ ed ။ Daryll Forde ။ London: Oxford University Press
Chaker, လမ်။ 1995 ။ Linguistique berbère: Études de syntaxe et deachronie ။ MS — Ussun amaziɣ 8, ser ။ ed ။ လမ် Chaker ။ ပဲရစ်နှင့် Leuven: Uitgeverij Peeters
Dallet, Jean-Marie ။ ၁၉၈၂ ။ Mangellet, Algérie, parler des At at dellnaire kabyle – français ။ Études etholinguistiques Maghreb – Sahara 1, ser ။ eds ။ လမ် Chaker နှင့် Marceau Gast ။ ပဲရစ် - ပြင်သစ်နိုင်ငံSociétéd'études linguistiques et anthropologiques
က de Foucauld, ချားလ်စ်ယူဂျင်း ။ ၁၉၅၁ ။ dictionnaire touareg – français, dialecte de l'Ahaggar ။4အုပျတှဲ။ [ပဲရစ်] Imprimerie nationale de France
Delheure ဂျင်း။ ၁၉၈၄ ။ Aǧraw n yiwalen: tumẓabt t-tfransist, Dictionnaire mozabite-français, langue berbèreparlée du Mzab, Sahara septentrional, Algérie ။ Études etholinguistiques Maghreb – Sahara 2, ser ။ eds ။ လမ် Chaker နှင့် Marceau Gast ။ ပဲရစ် - ပြင်သစ်နိုင်ငံSociétéd'études linguistiques et anthropologiques
——— ။ 1987 ။ Agerraw n မှတ်ပုံတင်: teggargrent – taṛumit, Dictionnaire ouargli – français, langue parléeà Oaurgla et Ngoussa, oasis du Sahara septentrinal, Algérie ။ Études etholinguistiques Maghreb-Sahara 5, ser ။ eds ။ လမ် Chaker နှင့် Marceau Gast ။ ပဲရစ် - ပြင်သစ်နိုင်ငံSociétéd'études linguistiques et anthropologiques
Kossmann, Maarten G. အ 1999 ။ Essai sur la phonologie du proto-berbère Grammatische Analysen afrikanischer Sprachen 12, ser ။ eds ။ Wilhelm JG Möhligနှင့် Bernd Heine ။ Köln: RüdigerKöppe Verlag
Kossmann, Maarten G. အနှင့် Hendrikus ယောသပ်သည် Stroomer ။ 1997 ။ "ဘာဘာ Phonology" ။ Alan S. Kaye တည်းဖြတ်သော အာရှနှင့်အာဖရိက (ကော့ကေးဆပ်အပါအ ၀ င်) Phonologies တွင် ။2အုပျတှဲ။ Vol ။ ၁ ။ Winona ရေကန်: Eisenbrauns ။ 461-475
Na-Zerrad, Kamal ။ 1998 ။ Dictionarrie des racines berbères (formes attestées) Paris နှင့် Leuven: Center de Recherche Berbère နှင့် Uitgeverij Peeters
ကားလ် -Gottfried Prasse, Ghubăyd gggg-Ălăwžəliနှင့်Ghăbdəwanəg-Muxămmăd။ 1998 ။ Asăggălalaf: Tămaẓəq – Tăfrăsist - Lexique touareg – français ။ 2nd ed ။ Carsten Niebuhr Institute မှပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်း 24, ser ။ eds ။ Paul John Frandsen၊ Daniel T. Potts နှင့် Aage Westenholz တို့ဖြစ်သည်။ København: ပြတိုက် Tusculanum စာနယ်ဇင်း
Quitout, Michel ။ 1997 ။ Grammaire berbère (rifain, tamazight, chleuh, kabyle) ပဲရစ်နှင့်မွန်ထရီယမ်Éditions l'Harmattan
Rössler, Otto ။ ၁၉၅၈ ။ "Die Sprache Numidiens" ။ Sybaris တွင် - Festschrift Hans Krahe မှအသက် ၆၀ ရှိသည်။ Geburtstag နံနက်7။ ၁၉၅၈ ဖေဖော်ဝါရီလ၊ dargebracht von Freunden, Schülern und Kollegen ။ Wiesbaden: Otto Harrassowitz
Sadiqi, Fatima ။ 1997 ။ Grammaire du berbère ပဲရစ်နှင့်မွန်ထရီယမ်Éditions l'Harmattan ။ ISBN 2-7384-5919-6 ISBN 2-7384-5919-6
↑ Nordhoff၊ Sebastian; Hammarström၊ Harald; Forkel၊ Robert; Haspelmath၊ Martin, eds. (2013)။ "Berber"။ Glottolog။ Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology။
↑ Hayward, Richard J., chapter Afroasiatic in Heine, Bernd & Nurse, Derek, editors, African Languages: An Introduction Cambridge 2000. ISBN 0-521-66629-5.
↑ Recensement général de la population et de l'habitat 2004။ Hcp.ma။ 2015-07-14 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Algeria။ Ethnologue။ 2013-04-30 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ALGERIA: population growth of the whole country။ Populstat.info။ 2013-04-30 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
မြည်တာလဲ" (Thamazight ကဗျာများသည်စာသားနှင့် MP3 ကဲ့သို့)
LL-Map စီမံကိန်းမှ Tamazight ဘာသာစကား၏မြေပုံ
ရှေးဟောင်း အရေးအသား များ
Imyura Kabyle စာပေနှင့်ပတ်သက်သော site
Amawal - ဘာရ်ဘာရ်အဘိဓာန်အွန်လိုင်းပေါ်ရှိအရင်းအမြစ် Archived 22 November 2011 at the Wayback Machine.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဘာရ်ဘာရ်ဘာသာစကား&oldid=727366" မှ ရယူရန်
Berber languages ပါဝင်သော ဆောင်းပါးများ
ဤစာမျက်နှာကို ၂၅ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၆:၂၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။